China Ruby coating, UV herinaratra, pirinty manjelanjelatra, borosy volo detangler famindrana rano miaraka amina orinasa sy mpamokatra bristles Intelliflex | Yongsheng
Famatotra fingotra, herinaratra UV, fanontam-pirinty manjelanjelatra, borosy volo detangler famindrana rano miaraka amin'ny volon'ny Intelliflex
Material: ABS, TPR sy nylon
Color: Mainty, Mena, manga, mavo, maintso,… fanaingoana.
Ny borosy volo Detangler dia mampiasa ny volon-doha Intelliflex manokana izay miondrika sy mikorisa mba hanala ireo knot tsy misy ezaka. Ny borosy volo Detangler dia mahavita tanteraka amin'ny volo mahitsy, volo olioly, volo manify, volo matevina, volo simba, wig, ary na fanitarana aza. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny volo WET na MAIMA tsy misy vaky. Ny volom-borona marani-tsaina dia afaka manasaraka moramora na dia ny kofehy sarotra indrindra aza tsy mamiravira, mihidy na misintona. Mamela volo toa mamirapiratra sy landy miaraka amina gorodona kely kokoa. Ny volom-bolo Detangler dia natao tsara mba hampihenana ny fanaintainana sy hiarovana ny volo amin'ny sisiny. Mamela anao hiborosy hery kely kokoa ianao mba hahafahanao miala volo miaraka amin'ny fahasimban'ny volo. Ny borosy volo mando dia tsy toy ny borosy mahazatra izay miasa amin'ny volo, miborosy ny knot. Ny borosy dia mamaha moramora ny fikolokoloana henjana indrindra amin'ny traikefa tsy misy fanaintainana miaraka amin'ny hery kely kokoa mba hahafahanao manala ny fahasimban'ny volonao. Ny volom-bolo azo volavolaina dia tsara ho an'ny olon-dehibe sy ny ankizy manana hodi-doha malefaka na mora tohina. Ny volom-borona tsy manam-paharoa dia afaka manasaraka moramora na dia ny kofehy sarotra indrindra aza tsy mamiravira, mihidy na misintona. Raha borosy tsotra no miasa amin'ny volo, mandrovitra sy misintona ny volo voavola fa tsy manelingelina azy. Ny bristles dia azo alefa an-tsoratra amin'ny fanandramana 4-5N ankehitriny.
Samy hafa ny endritsika azo atao amin'ny detangler. Ary afaka miaraka amin'ny famaranana vokany hafa. Ny famonoana fingotra, ny famindrana rano, ny famindrana mafana, ny herinaratra UV, ny fandokoana manjelanjelatra dia misy daholo.
Previous: Famatotra fingotra, famindrana rano, borosy volo elektrika UV miaraka amina ondana malefaka
Manaraka: UV herinaratra, mpanondrana rano, borosy volom-borona manonta mamirapiratra miaraka amin'ny tahony noforonina
Manaingo borosy volo
Volo borosy volo
Borosy volo volamena
Borosy borosy vita amin'ny hazo